Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika oo xaraan ku tilmaamay muddo kordhintii loo Sameeyay madaxweynaha iyo baarlamanka Somali | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika oo xaraan ku tilmaamay muddo kordhintii...
Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika ayaa cambaareeyey go’aankii uu Golaha Shacabka Soomaaliya qaaday 12-kii April, 2021 ee uu muddo laba sano ah ugu korhiyey muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamanka.
War-murtiyeed kasoo baxay Golaha ayaa lagu sheegay in go’aankaas uu dib u dhigayo doorashooyinkii Soomaaliya, islamarkaana uu waxyeeleynayo midnimada iyo xasilloonida Soomaaliya, iyo hanaankiii lagama maarkmaanka ahaa ee dimqoraadiyadda iyo dastuurka.
Golaha ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey saameynta xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku yeelan karto nidaamka federaalka Soomaaliya, midnimada ciidamada iyo hay’adaha amniga iyo sii wadista dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Qoraalka Golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu rumeysan yahay in heshiiskii 17-ka September 2021 uu yahay saldhigga iyo habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo doorasho xilligeeda ku dhacdo, daah-furan oo la isku haleyn karo.
Waxa uu ugu baaqay hoggaamiyayaasha Soomaaliya inay ahmiyad siiyaan danaha qaranka, ayna deg deg dib ugu billaabaan wada-hadallo saldhig looga dhigayo heshiiskii September 17, iyo soo-jeedintii guddiga farsamo ee Baydhaba ku kulmay bishii Febraayo.
Golaha ayaa sidoo kale ka codsaday guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu deg deg u magacaabo ergey, oo uu u diro Soomaaliya, si uu dhinacyada Soomaaliya iyo saamileyda siyaasadda ugala shaqeeyo inay heshiis gaaraan, dibna warbixin ugu soo celiyo Golaha afar toddobaad gudahood.
Previous articleHaweeneey 90 sano jir ah oo ka soo jeeda Hong Kong oo laga dhacay lacag gaaraysa HK250 milyan oo lacagta Hong kong ah una dhiganta $32m oo dollar
Next articleWasiirada Amniga , Gaadiidka iyo Taliyaha laanta Socdaalka oo ka hadlay Wixii ka dhacay Garoonka Diyaaradaha kulan degdeg ah ka yeeshey
.. Waxaa maanta isku shaandeyn lagu sameeyay qaar kamid ah golaha wasiirada ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha. Isbaddaladan waxay saameeyeen...
Astaamaha Iran-al-Qaacida’: xarun ka dhiganeysa mar labaad
Iiraan oo wacad ku martay ‘inay ka aargoosan doonaan weerrarkii...
Dowlada Federaalka oo ku dhawaaaday in Qaadka Kenya lagala soo dago...
Zlatan Ibrahimovic oo magacaabay Ronaldo ‘Il Fenomeno’ oo ah ciyaaryahanka ugu...
Ciidanka Kumaandooska Danab oo Bur buriyay gaari laga soo Buuxiyay Walxaha...
Farmaajo oo mar kale iskudayey in Musharaxiinta ka hor Istaago Aaska...